Gufgaf|Online ‘२.०’ का कारण रजनीकान्तले घटाए पारिश्रमिक !
‘२.०’ का कारण रजनीकान्तले घटाए पारिश्रमिक !
दक्षिण भारतीय अभिनेता रजनीकान्त यतिबेला कान्छी छोरी सौन्दर्याको दोस्रो विवाहको तयारीमा जुटेका छन् । ११ फेबु्रअरीमा उनले छोरी सौन्दर्याको दोस्रो पटक कन्यादान गर्नेछन् । छोरीको विवाह गराएसँगै रजनीकान्त आगामी तमिल सिनेमाको तयारीमा जुट्नेछन् ।
पहिलो पटक उनले निर्माता एआर मुर्गदासको सिनेमामा काम गर्दैछन् । यस सिनेमामा काम गर्नको लागि रजनीकान्तले आफ्नो पारिश्रमिक घटाएको भारतीय सञ्चार माध्ययममा उल्लेख गरिएको छ ।
सिनेमा लाईकाको ब्यानरमा निर्माण हुनेछ । लाईकाकै ब्यानरमा निर्माण भएको सिनेमा २.० ले निर्मातालाई नाफा नगराएपछि रजनीले पारिश्रमिक कम गरेर यहि ब्यानरको अर्को सिनेमामा काम गर्ने भएका हुन् ।
५ सय ४३ करोडमा बनेको सिनेमा ‘२ .०’ ले कारोबार त्यति नराम्रो गरेको भने हैन । तर सिनेमाको निर्माण लागत नै बढी भएपछि निर्मातालाई घाटा भएको थियो ।
यहि कारण रजनीले सिनेमाका निर्मातालाई घाटा नहोस भनेर पारिश्रमिक घटाएर लाईकासँग काम गर्न तयार भएको बुझिएको छ ।
यतिबेला प्रि प्रोडक्शनमा रहेको यो सिनेमा मार्च महिना देखि फ्लोरमा जानेछ । यस सिनेमामा रजनीको जोडीको रुपमा तमिल अभिनेत्री किर्ति सुरेशले काम गर्ने सम्भावना छ । किर्तिले यस अघि मुर्गदासको सिनेमा ‘सरकार’मा काम गरिसकेकी छिन् ।